Mmebi Ụwa Ò Ruwela Ka Ọ̀ Bụ Na O Ruwebeghị?
NA JENỤWARỊ afọ 2017, ndị sayensị kwuru otu ihe mapụrụ ọtụtụ ndị obi. Ha kwuru na oge a na-atụ anya na ọdachi nwere ike ịkpata ụwa mmebi adịkwuola nso karịa otú ọ dịbu na mbụ. Iji mee ka ihe ha na-ekwu dokwuo anya, ha ji otu elekere mee ihe atụ iji gosi na ụwa a agawala imebi. Ha kpọrọ elekere a Doomsday Clock. Ha wegara aka elekere ahụ ihu ihe dị ka tịnkọm tịnkọm iri atọ, nke mere ka ọ fọ nkeji abụọ na ọkara ka ọ kụọ elekere iri na abụọ nke abalị n’elekere ahụ. Ha kwuru na njinji ga-eji ma ọ kụọ elekere iri na abụọ nke abalị. Ihe ha na-ekwu bụ na ọ bụ n’afọ a ka mmebi ụwa kacha dịrị nso kemgbe ihe dị ka afọ iri isii gara aga.
Ọ bụ n’afọ 2018 ka ndị sayensị ahụ kwuru na ha ga-eleba anya ọzọ n’otú ihe si kwụrụ n’ụwa iji mata ma mmebi ụwa ọ̀ dịkwuola nso. Elekere ahụ ọ̀ ka ga-egosi na ụwa mmebi adịkwuola nso karịa otú ọ dịbu? Gịnị ka i chere? Mmebi ụwa ò ruwela? O nwere ike isiri gị ike ịza ajụjụ a. A sị ka e kwuwe, ndị ọkachamara enweghịdị otu olu n’okwu a. Ọ bụghị mmadụ niile kweere na ụwa a ga-emebi otu ụbọchị.
N’eziokwu, e nwere ọtụtụ nde mmadụ kweere na ihe ga-aka mma n’ọdịnihu. Ha kwuru na e nwere ihe mere ha ji kwere na ụwa a ga-adịru mgbe ebighị ebi, nakwa na ihe ga-emecha dịrị ụmụ mmadụ ná mma. Ihe a ha kweere ọ̀ bụ eziokwu? Mmebi ụwa ò ruwela ka ọ bụ na o ruwebeghị?
Gịnị bụ Doomsday Clock? Akwụkwọ bụ Bulletin of the Atomic Scientists kwuru na Doomsday Clock bụ elekere e ji ama atụ ọtụtụ mba n’ụwa kwekọrịtara na ha ga-eji na-amata ma oge ò ruwela mgbe nkà na ụzụ ọjọọ ụmụ mmadụ rụpụtara ga-akpata mmebi ụwa a. Ha kwuru na nkà n’ụzụ kacha njọ bụ ngwá agha ọgwụrụ mba. Ihe ndị ọzọ dịkwa njọ bụ́ nkà na ụzụ ndị na-emebi ihu ígwé, kemikal dị iche iche a na-emepụta nakwa kọmputa ma ọ bụ ihe ndị yiri ya. Ihe ndị a nwere ike isi n’otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ kpatara anyị nsogbu ndị na-agaghị ekwe mmekwata.